ခရစ်တော်ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာများ | The Sufferings of Christ | Real Conversion
ဇန်နာဝါရီလ ( ၃၁ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"ထိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကို ပရောဖက်တို့သည် စေ့စေ့ စစ် ကြောမေးမြန်းရှာဖွေ၍ သင်တို့ခံရသောကျေးဇူးတော်အကြောင်းကို ဟောပြောကြပြီ။ ခရစ်တော်ခံတော်မူရသောဆင်းရဲကို၄င်း၊ ဆင်းရဲခံပြီး မှဝင်စားတော်မူရသော ဘုန်းစည်းစိမ်ကို၄င်း၊ သူတို့အထဲ၌ရှိသော ခ ရစ်တော်၏ဝိညာဉ်သည် သက်သေခံနှင့်သောအခါ၊ အဘယ်မည်သော သူကို၄င်း၊ အဘယ်သို့သောအချိန်ကို၄င်း ဆိုလိုတော်မူသည်ဟု မေး မြန်းရှာဖွေကြ၏။" (( ၁ ပေ ၁း ၁၀- ၁၁ ) )
ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်များသည် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ရေးသားကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဘုရားသခင်ထံမှ စာတစ်လုံးချင်းစီ ပေးထားကြောင်း သမ္မာကျမ်းက ထပ် ခါတလဲလဲ ဖော်ပြထားပါသည်။ ပရောဖက်များက သူတို့ကိုယ်တိုင်နားမလည်နိူင်ကြောင်း အချို့ သောအရာများကို ရေးသားခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် တွေ့ရှိနားလည်လိုသောအရာ၏အဖြေမှန် ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှာဖွေကြပါသည်။ ဟေရှာယ ၅၃း နှင့် ဆာလံ ၂၂ က "ခရစ်တော်၏ဒု က္ခဝေဒနာခံစားခြင်း" အကြောင်းကို ပရောဖက်ဆန်ဆန် ပြောဆိုထားသည်။ ( ၁ပေ ၁း ၁၁ )
ယခုတွင် အပိုဒ်ငယ်ဆယ့်တစ်၏အဆုံးပိုင်းတွင်ရှိသည့် စကားလေးလုံးကို အသေအ ချာကြည့်ရှုစေလိုသည်။ "ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း" "tae is christon pathemata" ခရစ်တော်၏ "ပတ်တဲလ်မာတာ"ဖြစ်သည်။ ဂရိစကားလုံးက "နာကျင်ခြင်း" သို့မဟုတ် "ဒုက္ခ ဝေဒနာများ" ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ၄င်းသည် အများကိန်းဖြစ်ပြီး နာကျင်ခြင်းတစ်ခုထက်ပိုသော၊ ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုထက်ပိုသော အရာဖြစ်သည်။ "ခရစ်တော်ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာများ"။
လောကအသက်တာ၏နောက်ဆုံးသောအချိန်တွင် ခရစ်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ဒုက္ခ ဝေဒနာအကြောင်းကို ပေတရုက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား အပြစ်မှကယ်လွှတ်စိမ့်သောငှါ ဒုက္ခဝေဒနာပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်၌ ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာ၊
လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခြင်းမတိုင်မှီညတွင် ၄င်း၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည် အစပြု ပါသည်။ ၄င်းသည် နောက်ဆုံးညစာ စားပွဲပြီးဆုံးသည့် ညသန်ခေါင်တွင် အစပြုပါသည်။ ယေရှု သည် တပည့်တော်များအား အိမ်အပြင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူတို့သည် ညအမှောင်နက် ကြီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် စမ်းချောင်းလေးကို ဖြတ်၍ သံလွင်တောင်၏တစ် ဘက်တစ်ချက်သို့သွားကြသည်။ သူတို့သည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားခဲ့ ကြသည်။ ယေရှုသည် တပည့်တော်ရှစ်ပါးအား "ဤနေရာတွင်ထိုင်ပါ၊ ဟိုနေရာသို့ သွားပြီး ဆု တောင်းမည်" ဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ (မဿဲ ၂၆း ၃၆ ) သူသည် ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ နှင့်ယောဟန် တို့အား ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်အတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ခရစ်တော် သည် ထိုသုံးဦးကို ချန်ထားပြီး အနည်းငယ်ထပ်၍သွားခဲ့သည်။ သူသည် သံလွင်ပင်အောက် တွင် ဘုရားသခင်ထံသို့ တစ်ဦးတည်း ဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။
ယခုတွင် "ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း" သည် အစပြုပါသည်။ ( ၁ပေ ၁း ၁၁) လူသား၏လက်မဟုတ်သော မာကုသည် သူ့ကို မထိသေးပါ။ မာကု၊ သူ၏ဒုက္ခဝေဒနာသည် သူတစ်ဦးတည်းနေထိုင်သည့် ညအချိန်တွင် အစပြုပါသည်။ ၄င်းသည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အ တွင်း သံလွင်ခက်အောက်တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုဥယျာဉ်တွင် လူသားအားလုံး၏အပြစ်ဒုစရိုက် သည် သူ့အပေါ်တင်တော်မူသည်။ ထိုအပြစ်ကို "မိမိကိုယ်ပေါ်တွင်တင်လျက်" နံနက်အချိန် ရောက်သောအခါ ကားတိုင်သို့ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ ( ၁ပေ ၂း ၂၄ ) ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်။
"ထိုအခါ ယေရှုက၊ ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံးအလွန် ညိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။….. အကျွနု်ပ်အဘ၊ ဤခွက်သည် အကျွနု်ပ်ကို လွန်သွားနိူင်လျှင် လွန်သွားပါစေသော်။" ( မဿဲ ၂၆း ၃၈၊ ၃၉ ) )
ဤဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီးခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဆိုထားချက်မှာ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှလွတ်မြောက်ရန် ဆုတောင်းတော်မူသည်ဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်။ သိုပသော် ထိုသို့သောယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို မတွေ့ရပေ။ ဒေါက်တာ Rice နှင့် ဒေါက် တာ Buswell တို့က မှန်ကန်သောအနက်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ပေးသည်ဟု ကျွနု်ပ်ယုံကြည်မိသည်။ ဧဝံဂေလိဆရာ ဒေါက်တာ Rice နှင့်ဓမ္မပညာရှင် ဒေါက်တာ Buswell နှစ်ဦးစလုံးတို့က ခရစ်တော်၏ဆုတောင်းချက် "ဤခွက်သည် ငါ့ထံမှလွန်ပါစေသော်" ဟူသည်မှာ သေခြင်း "ခွက်ဖလား"၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ အပြစ်၏နှိပ်စက်ခြင်းဒုက္ခထဲမှ လွတ်မြောက်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟုဆိုကြသည်။
ယေရှုက မိမိကိုယ်ကို စိတ်ချောက်ခြားမှုရှိသည့်အခြေအနေတွင် ရှိသည်ဟု တွေ့မြင်ရ သည်။ သူသည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်တွင် သေခါနီးအခြေအနေတွင် ရှိသည်။ ယေရှုသည် "လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ၄င်း၏အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေနိူင်ရန် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်တွင် သေ ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်" ဆုတောင်းခဲ့သည်ဟု ဒေါက်တာ Buswell တို့က ဆုတောင်းခဲ့ ပါသည်။ (J. Oliver Buswell, Ph.D., A Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan, ၁၉၇၁၊ အပိုင်း ၃၊ စာ- ၆၂ ) "ယေရှုသည် နောက်တစ်နေ့တွင် လက် ၀ါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံဖို့ အသက်ရှင်နိူင်ရန် ထိုညတွင် သေခြင်းခွက်သည့် သူ့ကို ကျော်သွား ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းခဲ့သည်" ဟု ဒေါက်တာ Rice ကလည်း ဆိုပါသည်။ (John R. Rice, D.D., Litt.D., The Gospel According to Matthew, Sword of the Lord Publications, ၁၉၈၀၊ စာ- ၄၄၁ ) "သူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင် သဘာဝလွန်ခွန်အားများမပါဘဲ ခရစ် တော်သည် ထိုညတွင် ဧဒင်ဥယျာဉ်၌ အသေခံတော်မူမည်ဖြစ်သည်။" (Rice, ၄င်း၊ စာ- ၄၄၂) သင်အပြစ်ဝန်သည် သူ့အား ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင် သူ့အား အသေသတ်တော်မူသည်။
"ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျက် အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ ဆု တောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊ မြေပေါ်မှာကျ သောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း။" ( လုကာ ၂၂း ၄၄ ) )
ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်များကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တင်သည့် ထိုညတွင် ကြောက်ခမန်းလိလိဒုက္ခဝေဒနာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူ၏အန်ကြိတ်ခံစားရခြင်းသည် ချွေးစက်များ သွေးစက်များကဲ့သို့ "ယိုစီးရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။" ပရောဖက်က ဤသို့ဆိုပါသည်။
"ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုး ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။"
( ဟေရှာယ ၅၃း ၄ ) )
"ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့အပြစ်များကို သူ့အပေါ် ၌တင်တော်မူ၏။"
(( ဟေရှာယ ၅၃း ၆ ) )
ယောဟန် ၃း ၁၆ ကို လျှင်မြန်စွာဖတ်ရှုကြပါစို့။
"ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့် တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။"(( ယောဟန် ၃း ၁၆ ) )
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် ရင်ဆိုင်ခဲ့သော ဒုက္ခဝေဒနာများကို ဖြတ်သန်းဖို့ရန် ဖြစ်သည်။ ယခု တွင် ယေရှုဖြတ်သန်းခဲ့ရသောအရာသည် သေးငယ်သောအရာဖြစ်သည်ဟု ထင်ရသည်။ Joseph Hart က ဤသို့ဆိုသည်။
နာကျင်ခြင်း၊ ချွေးစက်များ သွေးစက်အလားဆီးဆင်း၊
ယေရှု၊ ကြီးမြတ်လှ သူ့မေတ္တာတရားပေတည်း။
(“သင်၏နားမလည်နိူင်သောဒုက္ခများ။” Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈။
သံဇဉ် “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).
"ခရစ်တော်ခံရသော ဒုက္ခဝေဒနာများ"( ၁ပေ ၁း ၁၁ ) )
ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ပထမဆုံး ဒုက္ခဝေဒနာသည် ကြီးမားသောအရာဖြစ် သည်ဟု မကြာခဏထင်ရသည်။ သူ့ကို အဘယ်လူသားနှင့်မျှ မထိရသေး။ သို့သော် သင်၏အ ပြစ်ကို ဘုရားသခင်က သူ၏အပေါ်သို့တင်သောအခါ အသွေးသည် ယိုစီးထွက်လာပါသည်။ William Williams က ဤသို့ဆိုသည်။
အပြစ်သားများ အတွက် ခင်းကျင်းထားခဲ့။
(“Love in Agony” William Williams, ၁၇၅၉၊
သံဇဉ် “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).
"ခရစ်တော်ခံရသော ဒုက္ခဝေဒနာများ"။ (( ၁ပေ ၁း ၁၁ ) )
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ပထမဆုံးတွေ့ကြုံရသော ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းရသည့်ဝေဒနာ၊
"ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းသည်" စတင်၍သာနေသေးသည်။ ရောက်ရှိလာ မည့်အရာများစွာရှိသည်။ လမ်းပြများသည် မီးတုတ်များဖြင့် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ လာခဲ့ကြ သည်။ သူတို့သည် ယေရှုကို မတရားစွပ်စွဲလျက် ဖမ်းဆီးကြသည်။ သူ့အား ယဇ်ပရောဟိတ် မင်းထံသို့ အားဖြင့်ဆွဲကြသည်။
"ထိုအခါ မျက်နှာတော်ကို ထံထွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ လက်သီးနှင့်ထိုး ကြ၏။ အချို့တို့သည်လည်း ပါးတော်ကိုလက်နှင့်ပုတ်၍၊ အချင်း ခရစ်တော်၊ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သူပုတ်သည်ကို ပရောဖက်ပြု ၍ ဟောတော်မူပါဟု ဆိုကြ၏။" ( ( မဿဲ ၂၆း ၆၇- ၆၈ ) )
"ထိုအခါ အချို့တို့သည် ကိုယ်တော်ကို တံထွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလျှင် လက်သီးနှင့်ထိုးလျက်၊ ပရောဖက်ပြု၍ ဟောတော်မူပါဟု ဆိုကြ၏။ မင်းလုလင်တို့သည်လည်း ပါးတော် ကို လက်နှင့်ပုတ်ကြ၏။"( မာကု ၁၄း ၆၅ ) )
Joseph Hart က ဤသို့ဆိုသည်။
တန်ခိုးကြီးသောလက်တော်ဖြင့် အပြစ်သားအား ချည်နှောင်သည်၊
("သူခံရသောဝေဒနာ” Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ သံဇဉ်
"ထိုအခါ စစ်သူရဲတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ပြဲတောရိရုံးတည်းဟူ သော အိမ်တော်ဦးအတွင်းသို့ ဆောင်သွား၍၊ စစ်သူရဲတတပ်လုံး ကို စုရုံးစေပြီးမှ၊ ကိုယ်တော်အား နီမောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်စေ ၍၊ ဆူးပင်နှင့်ရက်သောဦးရစ်ကို တင်ပြီးလျှင်၊ ယုဒရှင်ဘုရင်၊ ကိုယ်တော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကောင်းကြီးစကားကို ပြောကြ၏။ ခေါင်းတော်ကိုကျူလုံးနှင့်ရိုက်ခြင်း၊ တံထွေးနှင့်ထွေး ခြင်း၊ ရှေ့တော်မှာဒူးထောက်၍ ပြပ်ဝပ်ခြင်းကိုလည်း ပြုကြ၏။"( ( မာကု ၁၅း ၁၆- ၁၉ ) )
ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့် ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်။
"ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို၄င်း၊ နားပန်းဆံကို နှုတ်သောသူ တို့အား၊ ငါ့ပါးကို၄င်း ငါအပ်၏။ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံထွေးထွေးခြင်း မှ ငါသည် ကိုယ်မျက်နှာကို မလွှဲ။" ( ( ဟေရှာယ ၅ဝး ၆ ) )
" ဣသရေလမင်း၏ပါးကို ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်ကြပြီးတကား။" ( မိက္ခာ ၅း ၁ ) )
"ထိုအခါ မြို့ဝန်မင်း၏စစ်သူရဲတို့သည် ယေရှုကို အိမ်တော်ဦးသို့ ဆောင်သွား၍ စစ်သူရဲတတပ်လုံးကို အထံတော်၌ စုရုံးစေပြီးမှ၊ အ ဝတ်တော်ကိုချွတ်၍ နီသောဝတ်လုံကို ခြုံစေကြ၏။ ဆူးပင်နှင့် ရက်သောဦးရစ်ကို ခေါင်းတော်၌တင်ကြ၏။ ကျူတလုံးကိုလည်း လကျ်ာလက်တော်နှင့်ကိုယ်စေပြီးလျှင်၊ ရှေ့တော်မှာ ဒူးထောက် လျက် ယုဒရှင်ဘုရင်၊ ကိုယ်တော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟူ၍ ကိုယ်တော်ကိုပြက်ယယ်ပြုကြ၏။ ကိုယ်တော်ကို တံထွေးနှင့်ထွေး ကြ၏။ ကျူလုံးကိုယူ၍ ခေါင်းကို ရိုက်ကြ၏။" (မဿဲ ၂ရး ၂၇-၃၀) )
သူ့အတွက် ရွှေ သို့မဟုတ် ငွေသရဖူမရှိတော့ပါ၊
အပြစ်သားများသည် သူဝတ်ဆင်သောသရဖူများကို ပေးအပ်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်သည် သူ့အတွက် သရဖူဖြစ်ခဲ့၊
သရဖူကို ကောင်းတော်၌ ဆောင်းတော်မူခဲ့။
(“ဆူးခက်သရဖူ”၊ Ira F. Stanphill ၁၉၁၄- ၁၉၉၃ ရေးသား သည်။).
"ထိုအခါ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကိုယူ၍ ရိုက်တော်မူသည်။" ( (ယောဟန် ၁၉း ၁ ) )
"ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို ငါအပ်၏."( (ဟေရှာယ ၅ဝး ၆ ) )
သူ၏ကျောကို စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ရိုက်နှက်ကြသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှ ပါသည်။ ထိုသို့သောရိုက်နှက်ခြင်းတွင် လူများစွာ သေဆုံးခဲ့ကြသည်။ သူ၏နံရိုးကို ကြည့်ပါ။ နောက်ကျောကို အရိုးထိတိုင်လှီးဖြတ်ကြသည်။
ဆူးသရဖူနှင့်အတူ ဗိမာန်တော်သည် သွေးထွက်လျက်ကွဲအက်
(“သူခံရသောဝေဒနာ” Joseph Hart၊ ၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ သံဇဉ်
“ "ခရစ်တော်ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာ"(( ၁ပေ ၁း ၁၁ ) )
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် ရှေးဦးစွာခံရသော ဝေဒနာ။ နှိမ့်ချစော်ကားခြင်းကို ခံရသော ဒုတိယဝေဒနာ။
၃။	တတိယအချက်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်ခံရသော ဒုက္ခဝေဒနာ၊
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်အတွင်း၌ သွေးစက်များကဲ့သို့ ချွေးစက်များစီးကျပြီးနောက် ယေရှုသည် မျက်နှာပေါ်တွင် ရိုက်ခြင်းကိုခံရသည်။ ထို့နောက် သူ၏အသားသည် စုတ်ပြတ် သတ်သည့်တိုက်အောင် ရိုက်ခြင်းကိုခံရသည်။ ထို့နောက် ဆူးခက်သရဖူကို ခေါင်းတော်ပေါ် တွင်တင်ထားလျက် မျက်နှာပေါ်သို့ သွေးများကို ယိုစီးစေပါသည်။
သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ရိုက်သတ်ရန် ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသောအခါ သေလုမျှော ပါးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
"ကိုယ်တော်သည် မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းလျက် ဦးခေါင်းခွံအ ရပ် ဟူ၍တွင်သော အရပ်သို့ ထွက်တော်မူ၏။….ထိုသူနှစ်ယောက် အလယ်မှာ ယေရှုသည် နေရာကျသတည်း။"
( (ယောဟန် ၁၉း ၁၇- ၁၈ ) )
သူ၏လက်နှင့်ခြေများကို သံမှိုဖြင့်ရိုက်ကာ ကားတိုင်ပေါ်တင်ထားသည်။ လက်ဝါးကပ် တိုင်တွင်မြှောက်ထားလျက် နာကျင်စွာဝေဒနာများခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို Joseph Hart က ဤသို့ဆိုသည်။
(“သူခံရသောဝေဒနာ”၊ Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ သံဇဉ်
"သုံးချက်တီးအချိန်၌ ယေရှုက၊ ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာရှာဗခသာနိဟု ကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ အနက်ကား၊ အကျွနု်ပ် ဘုရား၊ အကျွနု်ပ်ဘုရား၊ အဘယ့်ကြောင့် အကျွနု်ပ်ကို စွန့်ပစ် တော်မူသနည်းဟု ဆိုလိုသတည်း။" ( (မဿဲ ၂ရး ၄၆ ) )
ကျွနု်ပ်တို့စိတ်နှလုံးက တိုင်းတာမရပါ။ လူသာက လူ့စကားလုံးအားဖြင့် ရှင်းပြ၍မရနိူင်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့နားမလည်နိူင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုတွင် ခမည်းတော်သည် သားတော်ကို စွန့်ပစ် တော်မူခဲ့ပြီး ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်ကြွေးကို ပေးဆပ်ဖို့ရန် အသေခံခဲ့သည်။
"ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသေသတ်ခြင်းကိုခံ၍၊ ၀ိ ညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ငါတို့ကို ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ၊ ဖြောင့်မတ် တော်မူသောသူသည် ၊ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်၊ ဒုစရိုက် အပြစ်များကြောင့် တခါခံတော်မူ၏။"
( ၁ပေ ၃း ၁၈ ) )
"ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုး ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကို ဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍၊ သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏။" ( (ဟေရှာယ ၅၃း ၅ ) )
ခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဟူသော အရာသည် ရန်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြီးမြတ်သောအရာဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်စား၊ သင့်အပြစ် အတွက် ပေးဆပ်ရန် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
"ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။" (( ၁ကော ၁၅း ၃ ) )
ယခုတွင် ကောင်းကင်အရပ်၌ ချီးမြှောက်ခံရ၊
(“ဟာလေလုယာ၊ ကယ်တင်သောအရှင်၊” Philip P. Bliss, ၁၈၃၈- ၁၈၇၆).
အပြစ်နှင့်အပြစ်တရားကြောင့်ခံရသောပြစ်ဒဏ်မှ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကို ခံလိုပါသ လား။ ခရစ်တော်ထံသို့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရောက်ရှိလာရပေမည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုရားသ ခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူသော သူထံသို့ ယခုလာပါ။ ကျွနု်ပ်စိတ်နှလုံးအား ဖြင့် တောင်းဆိုပါ၏။ ယေရှုထံသို့လာပါ။ သူ့ကို အားကိုးပါ။ ယုံကြည်ပါ။ သင်၏အပြစ်အလုံးစုံ ကို ဆေးကြေးတော်မူမည်။ သန့်ရှင်းသောမှတ်သားများကို သင့်အားပေးတော်မူမည်။ အချိန် တိုင်း သင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တော်မူမည်။ အဆုံးမရှိ၊ ထာဝရကာလတိုင် ကယ်တင်တော်မူ မည်။ "ခရစ်တော်ခံရသောဒုက္ခ" အားဖြင့် သင်၏အပြစ်အလုံးစုံထဲက ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တော် မူမည်။ ( ၁ပေ ၁း ၁၁ ) ယေရှုထံသို့လာပါ။ သင်၏အပြစ်အလုံးစုံကိုဆေးကြောပြီး သင်၏ဝိ ညာဉ်ကို ကယ်တင်တော်မူမည်။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဟေရှာယ ၅၃း ၁- ၆
"ဆူးရစ်သရဖူ"၊ (Ira F. Stanphill ၁၉၁၄-၁၉၃၃)/
"နာကျင်ခြင်းမေတ္တာ" (William Williams ၁၇၅၉ ) ရေးစပ်သည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်၌ ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာ၊ မဿဲ ၂၆း ၃၆၊ ၁ပေ ၂း ၂၄၊ မဿဲ ၂၆း ၃၈၊ ၃၉၊ လုကာ ၂၂း ၄၄၊ ဟေရှာယ ၅၃း ၄၊ ၆၊ ယောဟန် ၃း ၁၆။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းရသည့်ဝေဒနာ၊ မဿဲ ၂၆း ၆၇- ၆၈၊ မာကု ၁၄း ၆၅၊ မာကု ၁၅း ၁၆- ၁၉၊ ဟေရှာယ ၅ဝး ၆၊ မိက္ခာ ၅း ၁၊ မဿဲ ၂ရး ၂၇-၃၀၊ ယောဟန် ၁၉း ၁ ။
၃။ တတိယအချက်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်ခံရသော ဒုက္ခဝေဒနာ၊ ယောဟန် ၁၉း ၁၇- ၁၈၊ မဿဲ ၂ရး ၄၆၊ ၁ပေ ၃း ၁၈၊ ဟေရှာယ ၅၃း ၅၊ ၁ကော ၁၅း ၃။